छोरी जन्मिने वित्तिकै खा’ल्डा मा, ७ घन्टापछि हेर्दा शिशु जिवितै – Dainik Sangalo
छोरी जन्मिने वित्तिकै खा’ल्डा मा, ७ घन्टापछि हेर्दा शिशु जिवितै
September 29, 2020 10740
काठमाडो । संसारमा अनौठा र विश्वास नै गर्न नसकिने घटना कहिले काही हुने गर्छन् । हालै यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ जुन कुरा विश्वास गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ । छोरीलाई महत्व नदिने समाजमा एउटा परिवारले गरेको कामले कति नि र्द यी हुन्छ भन्ने देखाउँछ । छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हालसम्म पनि परिर्वतन भएको छैन ।
ब्राजिलको कैनारानामा एक नवजात शिशु जन्मियो । छोरीका रुपमा बालिका जन्मिएपछि परिवार खुसी भएनन् । उनीहरुले त्यो नवजात शिशुप्रति माया समेत देखाएनन् । शिशुलाई जिवितै खा’ल्डोमा गा डे । तर कसैले त्यसबारेमा प्रहरीलाई जानकारी दियो । प्रहरी पुग्दा सम्म ७ घण्टा बितिसकेको थियो ।
प्रहरीले बच्चाको घरमा गएर बच्चाको बारेमा सोध्यो । परिवारका सदस्यले भने शिशुको नि’धन भएका कारण खा ल्डो मा गा डे को बताए । तर प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गर्दा बच्चा जिवित फेला परेको थियो । प्रहरीले खा ल्डो वाट शिशुलाई जिवितै निकालेको छ ।
प्रहरीका अनुसार बच्चाको शरीरबाट अस्पतालले जन्मिदा हातमा लगाइदिने कार्ड पनि हटाएका थिएनन् । खा ल्डो बाट उद्धार गरेपछि सास लिनमा गाह्रो भएको कारण बच्चीलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गरे । हाल बच्चाको हेरविचार स्थानिय राज्यले गरिरहेको छ । शिशुले अहिले स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevफेरि लकडाउन हुने संकेत देखियो , आजबाट उपत्यकामा यस्तो कडाई सुरू
Nextबागलुङमा पहिरो परि ३८ जनाको मृ;त्यु, १६ जना अझै बे´पत्ता
नेपाल र इजरायलबीच यही असोज १४ गते नेपाली कामदार लैजाने सम्बन्धमा श्रम सम्झौता हुने
माछा र कुखुराको मासु राखिएको खोलमा कोरोनाभाइरसको अवशेष फेला परेपछि
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126323)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96667)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73747)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68977)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64069)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54857)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49907)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43673)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43531)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41793)